Weerar lagu qaaday Saldhig ay ku sugan yihiin Ciidamo Kenyan ah | dayniiile.com
Home WARKII Weerar lagu qaaday Saldhig ay ku sugan yihiin Ciidamo Kenyan ah
Warar dheeraad ah ayaa waxaa ay kasoo baxayaan dagaal culus oo degaan ka tirsan Gobolka Jubbada Hoose ku dhex-maray Ciidamada Kenya oo ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM & Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa yimid, kaddib markii sida la sheegay Xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig Ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ku leeyihiin deegaanka Hosingow oo hoostaga Degmada Badhaadhe ee Gobolka Jubbada Hoose, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Dadka degaanka Hosingow ayaa waxaa ay sheegeen inay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen labada dhinac, sidoo kalena uu jiro khasaaro dagaalka kasoo gaaray labada dhinac iyo dad rayid ah.
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya deegaanka Hosingow ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamada Kenya ay degaankaas ka wadaan dhaq dhaqaaqyo Ciidan maadaama Saldhiga ay ku sugan yihiin la weeraray.
Previous article9 Mudane oo Maanta qaatay Shahaadada Xildhibaannimo
Next articleRa’isul Wasaare Imran Khan oo ka badbaaday mooshin xil ka-qaadis ah
Xildhibaan Jacfar oo kaalmo gaarsiiyey dadka awoodin ciidda
Syria constitution talks are making little progress, according to a UN...
Zelensky: “Qofna ma saadaalin karo inta uu sii socon doono Duullaanka...